विपद्मा सरकार फाल्ने कि देखाउने ? : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार विपद्मा सरकार फाल्ने कि देखाउने ?
यतिबेला कोरोना कहर यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारीका रूपमा देखापरेको छ । दैव लाग्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा संसारका सानाठूला सबै मुलुक र धनी, गरिब सबै मानवले राम्रोसँग अनुुभव गर्न पाएका छन् । बुुझ्नेलाई इसारा काफी, कोरोना कहरबाट थोरैमा धेरै पाठ सिक्नुपर्ने हो, कसले कति सिक्यो आगतको व्यवहारले प्रस्टयाउला नै । अझै पनि कसैले आफूलाई अजम्बरी ठानेको छ भने त्यो मूर्खता शिवाय अरू केही होइन भन्ने शाश्वत सत्य यी घटनाले देखाएका छन् ।
अहिले बालीनाशक कीरा सलहको प्रवेशले नेपालका मुख्य क्षेत्रको खेतीबाली सखाप पारेको छ । वर्ष दिन खाने किसानको अन्नबाली सखाप पार्ने यो कीरा धेरै वर्षपछि नेपालमा पसेको विज्ञको ठहर छ । नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेकोले उसलाई अनुकूल हुने स्थान र समयसम्म नेपालमा बसेर लाखांै हेक्टरको अन्न तहसनहस पारेर बाहिरिएको छ । नेपालीले कोरोनासँगै यो अर्को आपत्ति सहन परेको छ ।
अघिल्लो सातादेखि आएको अविरल वर्षाका कारण नेपालका पूर्वी भागदेखि तराई र पहाडी भागसम्म वितण्डता मच्चाएको छ । अहिले हुने हार दैव नटारको स्थिति छ । तराई डुुबानमा छ । पहाडमा बाढीपहिरोले जनधनको अपूरणीय क्षति भएको छ । १६ सयभन्दा बढी विस्थापित छन् । सयौं जना बेपत्ता छन् । घरबारविहीनको लेखाजोखा नै छैन । दर्जनांै पहिरोले पुरिएर र बाढीले बगाएर ज्यान गुमाइसकेका छन् । दैवी प्रकोपबाट जोगाउन र जोगिन आवश्यक छ । राज्यशक्ति यतिबेला यसैका लागि परिचालन हुन आवश्यक भइसकेको छ । वक्तव्य र भ्रमणले भन्दा उद्धार र राहतले मात्र जनतामा आशा पल्लवित हुन सक्छ ।
राजनीतिक दल खिचडी पकाउँदै
यतिबेला मुलुक एक भएर दैवी तथा प्राकृतिक आपत्तिविरुद्ध सडकमा देखिने समय हो । राहत, उद्धार र प्रकोप न्यूनीकरणका सम्भाव्य उपायको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो । तर, विगत १५ दिनदेखि राजनीतिक दल र खासगरी सत्तारूढ दल सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर बिलखबन्दमा परेको छ । कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणको हवाला दिएर अनावश्यक चर्चा–परिचर्चा चलेका छन् । छिमेकी मिडियाहरू अत्यन्त निकृष्ट रूपमा हाम्रो सर्वोच्च धरोहरको खिलाफमा धावा बकिरहेका छन् । यो हामी सबैका लागि दुुर्भाग्य हो । हामी सबै एक भएर यी नीच प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिकार गर्न जरुरी छ । अहिलेको समयको माग यही हो । माउ खानेले पाडो राख्दैन भन्ने कुरा सबैले मनन गर्न जरुरी छ । सरकार त, आखिर यो वा त्यो जसले नेतृत्व गरेपनि हाम्रै नेताले नै गर्ने हुन । यसमा छिमेककिो अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप त्याज्य बनाउनैपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको विपद्का लागि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ
सडकमा देखिनुपर्ने सरकार यतिबेला विभिन्न बाहनामा बालुवाटार कोठामा बन्दक देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि सत्तापक्ष नै आत्तुर देखिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारको प्रतिरक्षाका लागि सडकमा युवाहरू उत्रेका छन् । सरकार फाल्ने र राख्ने वैधानिक उपाय र राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर छ । अर्कोतिर कसैलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्न हतार छ त कसैलाई टाँसिइरहन मन छ । यी रहर पूरा गर्ने वैधानिक थलो जहाँ छ, त्यहाँ गएर अभ्यास गरे हुन्छ । जनतासामु नांगो देखिन जरुरी छैन । आमजनतामा निराशा पैदा हुने गरी छताछुल्ल नपार्दा हुन्छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा यो सद्बुद्धि कहिले आउला ? कहिले उत्तर र कहिले दक्षिणको फेरो समातेर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीको सपनामा मुख रसाउने आदत कहिलेसम्म पाल्ने हो ? सरकारपक्षीय दल यस मामिलामा बढी सच्चिन जरुरी छ । विपक्षीको त धर्मै हो, सरकार गए मात्र आफू लोकप्रिय हुन सकिन्छ ।
जनताले यतिबेला सरकारको परिवर्तनभन्दा पनि कोरोना कहरबाट मुक्ति चाहेका छन् । लकडाउन हटोस् भन्ने चाहेका छन् । बच्चाहरू विद्यालय गएर पठनपाठनमा सरिक हुन चाहेका छन् । जनताले यतिबेला सलहलाई भगाउने उपाय खोजेका छन् । जनताले यतिबेला बाढी, पहिरोबाट मृत्यु हुने, बेपत्ता हुने र प्रभावित हुनेहरूको लागत र राहत खोजेका छन् । बेपत्ता परिवारको शीघ्र खोज र उद्धार चाहेका छन् । सरकार यसको होस् वा उसको उनीहरूलाई मतलब छैन । तर, सरकार आफ्नै दलका सदस्यहरूबाट घेराबन्दीमा छ ।
प्रतिपक्ष यसै पनि सरकारको विकल्प खोज्ने दल भइहाल्यो । यसकारण अहिले सरकार जसरी जनतासामु देखिनुपर्दथ्यो, त्यसरी देखिन सकेको छैन । अहिले सरकार परिवर्तन वा अर्को निहुँभन्दा पहिला जनताको पीरमर्का र खासगरी दैवी आपत्तीविरुद्ध रक्षात्मक रूपमा अघि बढनुपर्ने बेला आएको छ । सत्तारुढ, प्रतिपक्ष र सरकार एक भएर विपत्तिविरुद्ध सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ । राज्यका सबै संयन्त्र उपयोग गरी प्रभाव कम गर्न सरकार पनि चुक्न हुँदैन । तर, व्यवहारमा यो देखिएको छैन । यसर्थ, सरकार बालुवाटारको बन्द कोठामा भन्दा सडकमा, बाढी पहिरोमा र तराईको डुुबानमा देखिन जरुरी छ । जनताले त्यहाँ सरकार खोजिरहेका छन् ।
कर्मचारी मौन : अहिलेको विपद्का लागि कर्मचारीवर्गले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्र एकअर्काका पूरक संगठन हुन् । तर, हामीकहाँ नीति राजनीतिले बनाए पनि कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हुँदा सरकार सधंै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, लापर्बाही र अटेरीपनाका कारण आलोच्य हुन पुुगेको छ । न नाइ भन्न सक्ने, न सरकारको नीति खुला दिलले कार्यान्वयन गरेरै अघि बढन सक्ने । यसो गर्दा यो वर्ग जहिले पनि तटस्थतामा रमाएको देखियो । चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेटतर्फ जम्मा ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक बाहिरिएको छ ।
यसबाट आगामी दिनमा सरकारको लोकप्रियता बढछ कि घटछ ? निश्चय नै घट्छ । बजेट विनियोजन राजनीतिक नेतृत्वले गरे पनि कार्यान्वयन प्रशासनिक नेतृत्वले गर्दछ । किन साधारण बजेट खर्च हुँदा विकास बजेट खर्च हुन सक्दैन ? सरकारले विनियोजन गरेको रकम विकास, निर्माणमा लगाउन नसक्नु भनेको सरकारलाई असफल गराउनु नै हो । विकास बजेटको यो न्यूनतम खर्च कतै सरकारलाई असफल पार्ने प्रशासनिक तिकडमबाजी त होइन ? सोच्नैपर्ने बेला आएको छ ।
सरकार र कर्मचारी, सरकार र अन्य निकायबीचको परिपूरक सम्बन्धको अभाव आजको अर्को तीतो यथार्थता हो
परिपूरक सम्बन्ध खै ? : यतिबेला इतिहासकै सर्वाधिक बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलको सरकार हामीसँग छ । सरकारलाई काम गर्न वैधानिक कठिनाइ कहीं, कतै देखिँदैन । तर, पनि किन सरकारले गति लिन सकेको छैन ? सत्तारूढ दलले सोच्नैपर्ने भएको छ । कतै बहुमतीय सरकार ढालेर विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकाझैं मध्यावधिमार्फत अल्पमतमा बस्ने रहर पलाएको त हैन ? एकपटक सोचांै । डा. बाबुराम भट्टराईका शब्दमा भुइँको टिप्न खोज्दा कतै पोल्टाको पोखिने त होइन ? गम्भीर हुन जरुरी छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग शक्ति हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्रसँग विज्ञता । पहिलोमा शक्तिको घमण्ड र दोस्रोमा विज्ञताको दम्भ रहँदासम्म राज्यले गति लिन सक्दैन । संस्थागत सम्झनाको माध्यम नै कर्मचारीतन्त्र हो । यसैले, यसलाई सधंै अध्यावधिक राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता पुरानै हो । दैनिक सूचना, सल्लाह, जानकारी लुकाएर जनादेशप्राप्त सरकारलाई असहयोग गर्ने संवैधानिक शक्ति र व्यावहारिक छुट कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि मानेमा पाउन हुँदैन ।
तर, सरकार कैयौं कुरामा कर्मचारीतन्त्रकै कारण अलोकप्रिय बनेको पनि देखिन्छ । नयाँ संस्करणका रूपमा हालै प्रस्तावित निजामती विधेयकलाई यसैको निरन्तर कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । अग्रगामी नारा बोकेको सरकारका लागि पश्चगामी कानुनहरू किन प्रस्ताव गरिन्छन् ? सरकारको लोकप्रियतालाई यी व्यवहारले कदापि उजिल्याउँदैनन् । सरकार र कर्मचारी, सरकार र अन्य निकायबीचको परिपूरक सम्बन्धको अभाव आजको अर्को तीतो यथार्थता हो ।
कला Kumar Raut - July 15, 2020 0
तरकारीले बजार नपाएपछि सित्तैमा बाँड्दै किसान
Editor-Picks Dhruba Lamsal - May 24, 2020 0
बर्दिया । लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बजार बन्द छ । होटेल व्यवसाय, हाटबजार सबै बन्द छन् । यस्तो बेलामा किसानका बारीमा यतीखेर तरकारी भरिभराउ...
प्रदेश ३ Roshan Shrestha - July 12, 2020 0
समाज Dhruba Lamsal - June 10, 2020 0
Breaking News सीपी लोहिया - March 10, 2021 0
बैतडी । बैतडीको दोगडाकेदार ७ चडेपानिकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टलाई बाल सुधारगृह दिपायल पठाइएको छ । घटनामा आफ्नो संलग्नता...
Breaking News Sushila Bishwokarma - June 23, 2020 0
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को सङ्क्रमण आज ५३८ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता...